e-Salariés : Fiarahamiasan’ny CNAPS sy ny DGI - ewa.mg
News - e-Salariés : Fiarahamiasan’ny CNAPS sy ny DGI
Cet article e-Salariés : Fiarahamiasan’ny CNAPS sy ny DGI est apparu en premier sur déliremadagascar.
L’article e-Salariés : Fiarahamiasan’ny CNAPS sy ny DGI a été récupéré chez Délire Madagascar.
Kandidà Rajoelina: « Mila filoha mijery ny sosialim-bahoaka ny firenena… »
Mitohy hatrany ny fidinana ifotony ataon’ny mpanorina ny IEM eny anivon’ny fokontany. Nijery ifotony ny olana ary namaha izany avy hatrany ny tenany manoloana ny hetahetan’ny mponina. Anisan’ny fokontany notsidihiny ny eny Ambohimanarina, nitohy eny Andraisoro sy eny Tsarahonenana iny. Namakivaky elakela-trano ary nitafa mivantana tamin’ny mponina. « Tsy maintsy filoha Rajoelina Andry na fihodinana voalohany na faharoa na fahatelo. Mila filoha tanora i Madagasikara. Tsy ilaina intsony ny « veteran »… Ilaina ny filoha mijery ny fahasahiranam-bahoaka tsy mijanona anaty birao eny Ambohitsorohitra sy Iavoloha fotsiny”, hoy ny lahateniny amin’ireo vahoaka niatrika izany. Nijery ireo lalana “pavé” namboariny eny amin’ny boriborintany fahenina, fony ben’ny Tanàna, izy ka nambarany fa tsy voakojakoja intsony izany. Fandraisana andraikitra dieny izao… Nampanantena ny hanarenana izany ny kandidà laharana faha-13.Teo koa ny nilazany fa tsy iandrasany ho voafidy ny tenany vao hiasa sy handray andraikitra fa dieny izao izany. “Horaofintsika ny fako. Homena tambiny amin’ny asa tana-maro ireo hiasa hanao izany… Hitankosina amin’ny vahoaka ny mpitondra ary hampandroso ny firenena. Hatao indroa isan-kerinandro ny “Tsena mora” hanalana fahasahiranana ny vahoaka”, hoy ihany izy. Hitohy any amin’ny fokontany hafa indray ny hetsika tahaka izao. Randria sy Fano L’article Kandidà Rajoelina: « Mila filoha mijery ny sosialim-bahoaka ny firenena… » a été récupéré chez Newsmada.
Fanabeazam-boho ny « Slow dance »: miditra lalindalina hatrany ny Band dago
Nanana ny vanim-potoana nampalaza azy tokoa ny “Slow dance”, teto Madagasikara. Misy ny mahatadidy fa ao ihany koa ireo tsy niaina niaraka taminy. Ny fahatsapana ireo no hamerenan’ny tarika Bad dago ny lazan’io gadona kanto io.Raha toa ka hadinodinon’ireo mpankafy ny fisian’ny « slow dance » noho ny fibosesehan’ireo gadona hafa loko teto Madagasikara… Tapa-kevitra ny hilofo ho amin’ny famerenana izany an-tsehatra indray i Rivo, i Tahina ary i Jamel. Telo mirahalahy samy zanak’Avaradrano, mivondrona ao anatin’ny tarika Band dago. Tsy nihambahamba ny tarika « Band dago » nanambara fa « tonga ny fotoana hampitana ny faneva ho an’ireo zandry mahaleo mahalasa avy amin’ireo zoky be efa nahavita be tokoa teo amin’ny fiangaliana ny « Slow dance » teto Gasikara”.Fanatsarana hoentin’ny Band dago ny fampivadiana amin’ny fomba kanto sy manaraka ny fitsipiky ny mozika ny « slow dance » amin’ny gadona malagasy ary ny fanatevenana bebe kokoa ny lafiny fandrindrana hanaraka vanimpotoana. Nampiavaka ireo tarika zokiny, ny filalaovana ny « Slow dance » ary mbola tazonin’ny « Band dago » ilay fianjaika ahatarafana hajejoana, izay manome hasina ny mpankafy sy lanja manokana ihany koa ny mozika atosak’izy ireo.Ampahany amin’ireo sanganasa efa vita rindrantsary, ankehitriny, ny « Ho any aminao » ary hivoaka ny volana ambony hitsidika io ny “Anjarako ianao”.Raha tsiahivina, tany amin’ny taona 2006 no nahazo laka tao am-pon’ireo mpankafy ny fankafizana ny « Slow dance » teto an-tanindrazana, indrindra teto an-kibon’Imerina, tamin’ny alalan’ireo tarika niangaly izany avy any Antsirabe. Anisan’ny hotazonina ilay fomba fihirana sady fandihizana rehefa miantsehatra ny mpiangaly ny « Slow dance », raha ny fanazavan’izy telo mirahalahy.Misokatra malalaka amin’ny fiaraha-miasa amin’ireo mpanakanto vonona hanandratra avo ny kanto an-kira ry « Band dago » mpanakanto zanak’Avaradrano.Nanangona : HaRy Razafindrakoto L’article Fanabeazam-boho ny « Slow dance »: miditra lalindalina hatrany ny Band dago a été récupéré chez Newsmada.